बिज्ञान राज, Author at Kavyalaya - काव्यालय
by बिज्ञान राज पुस २५, २०७७
बाटाहरू सुनसान थिए । रुखहरू नतमस्तक थिए । किन ? यो वास्ता नगरी हामी निरन्तर अघि बढिरहेका थियौँ । पानी एकनासले परिरहेको थियो । हावा क्रमबद्ध चिसो ल्याइरहेको थियो । कताबाट ? यो पनि वस्ता नगरी हामी निरन्तर अघि बढिरहेका थियौँ । सूर्यले आफ्ना बचेराहरू उदाएको थिएन । चराहरूले आफूलाई उदाएका थिएनन् । के गर्दै होलान् ? यो त झन् वास्ता नगरी हामी निरन्तर अघि बढिरहेका थियौँ । मानिसहरूको नामोनिशान थिएन । जनावरहरूको हल्लाखल्ला थिएन । के वंशनाश भयो ? यो त सुखद खबर मान्दै हामी झन् आरामले अघि बढेका थियौँ । बढिरहेका थियौँ । बढि नै रहेका थियौँ ।
बताइहालौँ, त्यो दिन म एक सुन्दर स्त्रीसँग थिएँ । अर्थात् हामी कोही थियौँ । कतै थियौँ । कतै गइरहेका थियौँ । कतैबाट त्यतातिर गएका थियौँ । वर्षाको दिनमा कोही हुनु, कतै हुनु, कतै गइरहेको हुनु र कतैबाट त्यतातिर गएको हुनु । धर्ती बिरामी भई उत्तानो परेको छ भन्ने बुझाउँदैन र ? र आकाश अझैसम्म नमरेर छटपटाइरहेको छ भन्ने लाग्दैन र ?
गाँउहरू देखिँदैन थिए । सहरहरू भेटिँदैन थिए । आफूलाई कता लुकाएका थिए कुन्नि ? भेटिहाले पनि स्कुलहरू खुलेका थिएनन् । वेश्यालयहरू बन्द थिएनन् । नानीहरू वेश्यालयतिर त गएका थिएनन् ? कविहरू कविता लेखिरहेका थिएनन् । हत्याराहरू कविता लेखिरहेका थिए । त्यसोभए, कविहरू हत्या गरिरहेका थिए ? गल्लिहरू गायब थिए । चोकहरू हुँदैन थिए । भट्टीहरू छुट्टिमा थिए । चिया पसल लेखिएका थिएनन् कतै । कतै पनि सिंहदरबार थिएन । कतै पनि कारागार थिएन । कतै पनि ट्राफिक जाम थिएन । कतै पनि कलाकार, कतै पनि बलात्कार…….
अँ, म तपाईंंहरूलाई बताउँदै थिएँ, त्यो वर्षाको दिन थियो । म कुनै सुन्दर स्त्रीसँग थिए । अर्थात् हामी कोही थियौँ । कतै थियौँ । कतै गइरहेका थियौँ र कतैबाट त्यतातिर गएका थियौँ । साच्ची हामी को थियौँ ? कता गइरहेका थियौँ ? ठयाक्कै कहाँ थियौ ? कताबाट त्यतातिर गएका थियौ ? यो तपाईंं भन्नुहोस् । एक तपाईंं मात्र हो जसले यी सब भन्न सक्नु हुन्छ । हो हो तपाईंं । अँ अँ तपाईं । पक्का पक्का तपाईंं । धरोधर्म तपाईंं । ढाँटे मरिजाऊँ । नढाटे बाँचिजाऊँ । कि कसो ?
यो किन तपाईंंलाई जिम्मा लगाएको हुँ भने तपाईंं बेरोजगार हुनुहुन्छ नि । रोजगार दिलाउने तपाईंंको मार्कसिटभित्र कतै धर्मसिएको हुनुपर्ला । त्यो धर्मसिएको मार्कसिटलाई झनझन धर्मसिन छाडेर यथाशिघ्र तपाईंं मैले दिएको कामकुरोतिर लागिहाल्नुहोस् । काम जति दिन लगाएर गरे पनि हुन्छ । कुनै यकिन कार्यविधि छैन । म त चाहन्छु तपाईंं जिन्दगीभर यही काम गरी बस्नुहोस् । तलब ? तलबको तनाव नलिनुहोस् । त्यो हरेक घण्टा तपाईंंको बाकसमा आइपुग्छ जँहा तपाईंंको मार्कसिट चरमसीमामा धर्मसिएको फेला पर्न सक्छ । शुभकार्य ।
म बताउँदै थिएँ, म एक सुन्दर स्त्रीसँग थिए । त्यो को स्त्री थिई होली ? भनेर अडकल नगर्नुहोस् । किनकि यो व्यर्थ हुनेछ । यसरी बुझ्नुहोस् न, ऊ जो स्त्री थिई मेरी प्रेमिका थिई । तपाईंंले आफ्नो सोच्नु त भएन ? नसोच्नुहोस् । किनकि ऊ मेरी प्रेमिका थिई । धन्न ऊ तपाईंंकी प्रेमिका भइन । के गर्ने रीत खराब रहेछ । प्रित झन जाली रहेछ । आ… भुल्नुहोस । अँ, यो भनेर भुल्नुहोस् ‘भुल्न जरुरी छ’ कि \_यो जन्ममा उसलाई प्रेमिका बनाउन नसके पनि अर्को जन्ममा पक्का बनाउने छु ।’ हो, यही भनेर भुल्नुहोस् । मेरो हमदर्दी छ तपाईंंमाथि ।
म बताई नै रहेको थिएँ । म एक स्त्रीसँग थिएँ । जो किनै सुन्दर थिई । जो मसँग चिपिक्क टाँसिएकी थिई । किनकि हामीसँग छाता वा बर्सादि केही पनि थिएन । एक अर्कामा टिपिक्क, चिपिक्क टालिनु बाहेकको विकल्प थिएन । त्यही विकल्प उसले भरपुर मात्रमा उपयोग गरिहेकी थिई। वा हामी दुवै गरिरहेका थियौँ । कतै हामी वनमान्छे पो थियौ कि ?
यतिखेर हामी घना जङ्गलबीचको एउटा प्रतीक्षालयमा हुनुपर्ने हो । हो त हुनुपर्ने । तर हामी थियौँ घना जङ्गलबीचको डाँडामा । डाँडाको छेउमा एउटा ठूलो रूख थियो । त्यसमै अढेस लाग्यौँ । वा लाग्न पुग्यौँ । वा कसैले लाग्न पुगायो । वरवर, परपर हामीजस्तो र हामी ‘नजस्तो’ कुनै पनि आकृतिहरू देखिएका थिएनन् । यही मौका छोपेर उसले निकै कसेर अंगाली । म अंगालिएँ । अन्ततः हामी अंगालियौँ । स्वभाविक छ, हामी केहीछिन प्रेमालीन भयौँ ।
हो, म निरन्तर बताइरहेको छु । त्यसदिन, निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । म एक सुन्दर स्त्रीसँग थिएँ । हामी कतैबाट त्यतातिर पुगेका थियौँ । हामी घना जङ्गलबीचको एउटा ठूलो रूखमा अढेसिएर प्रेमालीन थियौँ । केहीछिनको प्रेमालीन पछि हामी बिस्तारै स्खलित भएका थियौँ । केहीबेर मौन बसेका थियौँ । एक अर्काको स्पर्श, उपस्थिति र अंकमाल आभास गरिरहेका थियौँ ।
यसैबीचमा गहिरो मौन वा सन्नाटा वा आनन्द चिर्दै, फोडदै उसले अचानक भनेकी थिई, “हिजो राति मैले देखेको अनौठो सपना स्मरण भयो । म सम्झिन चाहन्नँ तर त्यो आफै आयो । अनुमति नलिइकनै आयो । भनूँ ? वा नभनूँ ? भने पनि फेरि भोगिने डर । नभने पनि फेरि भोगिने डर । म डराइरहेकी छु, इः हेर्नु त म काँपिरहेकि छु, शरीर तातिएर आएको छ, मेरो आवाज थरथराइरहेको छ ।” अढेसिएको रूखको हाँगातिर हेरी । एकछिनसम्म हेरी । टोलाई । टोलाएकी होइन रहिछ । हेरी मात्र रहेकी रहिछ । टोलाउनु र हेरिरहनुको भिन्नता म चाल पाइरहेको थिएँ । थरथर आवाजमै अघिको वाक्यलाई क्रमशः पूरा गरी, “मेरो आत सुकेर आएको छैन र ? म धेरै नै कमजोर देखिँदै आएकी छैन र ? म क्रमशः सुक्दै सुक्दै लास हुँदै गइरहेकी छैन र ? हे, मार्क्स, तिमी कहाँ छौ ? जहाँ छौ, म भएकोतिर आऊ । म रहेकोतिर आऊ ।
— यदि तिमी चिहानमा दफन भएका छौ भने चिहानबाट ब्युँतिएर आऊ ।
— यदि तिमी अहिलेका पूँजीवादी कम्युनिष्टहरूसँग क्रान्ति गरिरहेका छौ भने तिनीहरूमाझबाट भागेर आऊ ।
म छटपटाहटको चरम उत्सर्ग वा उत्कर्समा छु । मलाई मुक्त पार ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा म मौन कसरी बस्न सक्थेँ ? बस्नु पनि भएन । उसलाई यस्तो हालमा कसरी गुज्रिन दिन्थेँ ? दिनु पनि भएन… लाग्न त निकै बेर लाग्यो तर अन्ततः मैले उसलाई सम्हाल्दै वा शान्त पार्दै उक्त सपना कहन लगाएँ । उसले कही, “सपनामा आफू झुन्डिएर मर्न चाहन्छु । यति धेरै चाहना छ कि म झुण्डिन हाँगा हाँगा गइरहेकी छु तर झुण्डिनै लाग्दा ममा एक्कासि आफूलाई झुण्डिन नदिने चेतना आइपुग्छ । यही मौकामा आफूलाई झुण्डिनबाट जोगाउन म एकएक गर्दै प्रत्येक रूखका हाँगाहरू काटदै गइरहेकी छु । अचम्म कस्तो भने जति काटदै जान्छु, ती काटिएका हाँगाहरू पुनः पलाइहाल्छन् । अचानक झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । हाँगाहरू काट्न छोडेर हतारहतार झुण्डिन तमतयार हुन्छु । त्यतिखेरै कताबाट हो नझुण्डिने चेतना आइपुग्छ । यही मौकामा आफुलाई झुण्डिनबाट जोगाउन म हागाहरू काटन लागीपर्छु । फेरि एक्कासि झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । हाँगाहरू काट्न छोडछु । हतारहतार झुण्डिन तमतयार पर्छु । झुण्डिनै लाग्दा कताबाट हो फेरि नझुण्डिने चेतना आइपुगिहाल्छ । एकैछिन पछि फेरि झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । फेरि नझुण्डिने चेतना आइपुग्छ । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यस्तैमा म अत्तालिएर ब्युँझिएकी थिएँ ।”
ऊ सपनामा अत्तालिएकी थिई, सुनेर म विपनामा अत्तालिएको थिएँ । ऊ सपनाबाट ब्यूँझिएकी थिई, म विपनाबाट ब्यूँझिएको थिएँ ।
के यस्तो पनि सम्भव छ ?
एउटी स्त्री, एउटी सुन्दर स्त्री झुण्डिन चाहन्छे । जबै ऊ झुण्डिन तमतयार हुन्छे हठात उसभित्र आफूलाई झुण्डिन नदिने चेतना आइपुग्छ । र ऊ आफूलाई झुण्डिन नदिन संसारभरका हाँगाहरू काटदै जान्छे । अचम्म कस्तो भने ती काटिएका हाँगाहरू पुनः पलाउँदै जान्छन् । फेरि एक्कासि उसमा झुण्डिने चाहना आउँछ । ऊ झुण्डिन तमतयार हुन्छे । यतिखेरै कताबाट हो नझुण्डिने चेतना आइपुग्छ र ऊ आफूलाई झुण्डिनबाट जोगाउन हाँगाहरू काट्दै जान्छे । यो क्रम निरन्तर चालु छ ।
के यस्तो पनि असम्भव छ ?
म बताउँदै थिए । अँ, म के बताउँदै थिएँ ? मैले भुलेको नहुनु पर्ने हो । तर भुलेँ । भुल्नु पनि मेरो नभुल्नु पर्ने विशेषता हो । तर नभुल्नु मेरो भुल्नु पर्ने विशेष्ता होइन ।
खैर, म जे बताउँदै थिएँ त्यसलाई हामी सबैले एकछिन भुलौँ । बरु, यो कविता पढौँ ।
रूखको हाँगामा आफू झुण्डिएको सपना देखेपछि
उसले काटदै गई हाँगाहरू
यो होस नराखेर कि हाँगामा पात कति आनन्दले झुण्डिएको छ !
ठिक छ, उसको रिस हाँगासँग थियो
तर हाँगा काटने निहुँमा उसले पातलाई किन खसाली ?
ठिक छ, पात हाँगामा झुण्डिएको थियो
तर पात झुण्डिरहन चाहन्थ्यो किन झुण्डिन दिइन ?
फेरि ऊ रूखको हाँगामा सपनामा झुण्डिएकि थिई
ग्यारेन्टी के छ ऊ विपनामा झुण्डिन्छे ?
ल मानौँ ऊ विपनामै झुण्डिई, रूखको हाँगामै झुण्डिई
हाँगाले उक्साएर ऊ झुण्डिई वा समयको मैथुनले ?
हाँगाले जबर्जस्ति झुण्डायो वा ऊ जबर्जस्ति झुण्डिई हाँगामा ?
एकछिनलाई मानिदिऊँ यो संसारमा हाँगा छैन
के ऊ अब झुण्डिन्न ?
के ऊ झुण्डिनलाई अरु चिज छैनन् ?
के ऊ हाँगा भएर मात्र झुण्डिएकी हो ?
दोषी हाँगा कि हालत ?
दोषी हाँगा कि जिन्दगी ?
दोषी हाँगा कि हबिगत ?
दोषी हाँगा कि खुद ?
यो कविता घर पुगेर हतारहतार लेखेर सकेको हुँ । खै कस्तो भयो ? सोध्ने मुडमा छैन । सुत्ने मुडमा छु । किनकि निन्द्राले आक्रान्त छु । सुत्छु है त । शुभ रात्री ।
आफू झुण्डिएर मर्न चाहन्छु । यति धेरै चाहना छ कि म झुण्डिन हाँगा हाँगा गइरहेकी छु तर झुण्डिनै लाग्दा ममा एक्कासि आफूलाई झुण्डिन नदिने चेतना आइपुग्छ । यही मौकामा आफूलाई झुण्डिनबाट जोगाउन म एकएक गर्दै प्रत्येक रूखका हाँगाहरू काटदै गइरहेकी छु । अचम्म कस्तो भने जति काटदै जान्छु, ती काटिएका हाँगाहरू पुनः पलाइहाल्छन् । अचानक झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । हाँगाहरू काट्न छोडेर हतारहतार झुण्डिन तमतयार हुन्छु । त्यतिखेरै कताबाट हो नझुण्डिने चेतना आइपुग्छ । यही मौकामा आफुलाई झुण्डिनबाट जोगाउन म हागाहरू काटन लागीपर्छु । फेरि एक्कासि झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । हाँगाहरू काट्न छोडछु । हतारहतार झुण्डिन तमतयार पर्छु । झुण्डिनै लाग्दा कताबाट हो फेरि नझुण्डिने चेतना आइपुगिहाल्छ । एकैछिन पछि फेरि झुण्डिने चाहना आइपुग्छ । फेरि नझुण्डिने चेतना आइपुग्छ । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
चेतना र चाहनाको तछाडमछाडमा कसले बाजी मार्यो ? थाहा नै नपाई म बिहानपख झल्यास्स ब्यूँझिएँ । म झल्यास्स दिउँसोपख वा साँझपख पनि ब्यूँझिन सक्थेँ वा जतिखेर पनि ब्यूँझिन पाउँथेँ वा म ब्यूँझिनै चाहन्नँ थिएँ कि ? त्यो मेरो कुरो हो । यो नितान्त मेरो कुरो हो । कसले गर्यो मेरो कुरामा हस्तक्षेप वा हवाई आक्रमण ? कसको हो मेरो चाहनाविरुद्ध मलाई ब्युझाउने यत्रो हिम्मत ? होस् को तँ ? खैर, तँ जो होस् । मेरो सामुन्ने आइज । घुँडा भुइँमा टेका । माफी माग् । वचन दे ! अरे अमिताभ होइन ! कि अबदेखि अनुमतिबिना ब्यूँझाउँदिनँ भनेर । ठिक ?
घाम मेरो बिस्तारामा आइपुगिसकेको रहेछ । थाकेको होला त्यसैले मेरो बिस्तारामा लुटपुटिन खोजिरहेको छ । उठेर छेउमा बस्छु । मेरा आँखा झ्यालतिर पर्छन् । पर्दा कसले पो उघारिसकेछ । त्यो सक्सियत को होला ? वा को होली ? सपनाको ह्याङओभरमा एकछिन एकै स्थानमा बसिरहेँ । बस्नु कर थियो । कहर थियो । किनकि सपनाले निकै सताइरह्यो । अँठ्याइरह्यो । यतिसम्म दिमागलाई कँजाउन थालेको थियो कि शुरुमा आफूबाहेक सम्पूर्ण अस्तित्व शून्य सिवाय केही लागेन । एकछिन पछि सम्पूर्ण अस्तित्व बाहेक आफू शून्य सिवाय अरु केही पनि लागेन । यसकारण दुवै हात कानमा राखेर बिलकुल हलचल नगरी चुपचाप एकै स्थानमा बसिरहेँ । एकै पोजिसनमा ।
म सपनाबाट ब्यूझेँ कि सपनामा ? म विपनाबाट ब्यूझेँ कि विपनामा ?
यस्तो लागिरह्यो कि यो जुन सपना मैले देखेँ, देखे भनौँ कि भोगेँ भनौँ ! अँ, जुन सपना मैले भोगेँ, होइन सपना कहाँ भोगिन्छ ? देखिन्छ पो ! अँ, जुन सपना मैले देखेँ, के साच्ची सपना देखिन्छ र ? मेरो विचारमा सपना महसुस पो गरिन्छ ! अँ, यो ठिक छ, जुन सपना मैले महसुस गरेँ..उही सपना मलाई लागिरह्यो कि हिजो दिउँसो कसैले विपनामा सुनाएकी थिई । मलाई बिस्तारै याद आउन थाल्छ । वर्षा भइरहेको थियो । ऊ एक स्त्री थिई । ऊ निकै सुन्दर स्त्री थिई । ऊ मेरी प्रेमिका पनि थिई । पत्नि चियाको कप मेरो हातमा थमाइदिएर पुनः भान्सातर्फ जान्छिन् । हो, ऊ मेरी प्रेमिका थिई । अर्थात् हामी कोही थियौँ । कतै थियौँ । कतै गइरहेका थियौ । कतैबाट त्यतातिर गएका थियौँ । अनि हामी घना जङ्गलबीचको एउटा ठूलो रूखमा अढेसिन पुगेका थियौँ । त्यहाँ एकछिन प्रेमालीन भएका थियौँ । यत्तिकैमा अचानक झस्किँदै उसले कहन पुगेकी थिई उक्त सपना । भन्दाभन्दै ऊ अंगालोमा टाँसिएकी पनि थिई । छोरी दगुर्दै मेरो काखमा बस्छे । दाह्री चलाउँछे । गालामा म्वाइँ खान्छे र भन्छे, “मामुले भन्नुभएको हजुरको नयाँ कथा हाँगा सकिएको रे । यो सहित १५ वटा कथा पुगे रे । किताबको शीर्षक पनि हाँगा नै राख्ने रे । अँ, बाबा मलाई त्यो हाँगा कथा सुनाउनु न । पिलिज के !”
पुस २५, २०७७0comment
(ओशोको जन्म सन १९३१, डिसेम्बर ११ मा भएको हो । उनी आफ्नो समयका सबैभन्दा चर्चित दार्शनिक हुन् । त्योभन्दा पनि उनी सबैभन्दा ठूला पाठक ठहरिन्छन् यस अर्थमा कि उनले आफ्नो…
by बिज्ञान राज जेष्ठ १०, २०७७
धोका चुलोले आगो बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ त्यो भन्दा उत्तम – चुलोलाई धोका दिएर आगो निभ्नु के सहि होइन ? के सहि होइन पृथ्वीलाई…
by बिज्ञान राज बैशाख २०, २०७७
(ओशोको जन्म सन १९३१, डिसेम्बर ११ मा भएको हो । उनी आफ्नो समयका सबैभन्दा चर्चीत दार्शनीक हुन् । त्योभन्दा पनि उनी सबैभन्दा ठूला पाठक ठहरिन्छन् यसअर्थमा कि उनले आफ्नो जीवनकालभरि…
तपाईंलाई केही कुरा (आदेश वा उपदेश नभएर प्रेमले) — यतिखेर देशमा लकडाउन छ । चौथो हप्ता चलिरहेको छ । मान्छेहरु घरभित्रै हुलिएका छन । अति आवश्यक बाहेकका सबै व्यापार, कल-कारखाना,…
by बिज्ञान राज चैत्र ८, २०७६
संयोग म जन्मिएकै बेला कोही पक्कै मर्यो होला त्यो को होला ? म हाँसिरहेकै बेला कोही पक्कै रोयो होला त्यो कस्तो होला ? म बसेपछि कोही उठ्यो होला म हिँडेपछि…
by बिज्ञान राज माघ ४, २०७६
आऊ जाऊँ चिहानतिर कति जानु प्रेमिकाको घरतिर ? चिया पसलतिर ? पुस्तकालयतिर ? आऊ आज जाऊँ चिहानतिर एक अद्भूत शून्यतातिर केही प्रश्न छन् मनमा जो साच्चिकै चिहानलाई गर्नु छ ।…